ယခုသတင်းအတွက် မှတ်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုန် Burmese Font Download
albert Wong နေရပ်- Los Angeles :
I tried to set up the Burmese version Zawgyi-one Burmese Font on this computer.
I entered the right Password and User ID
but it does,t work. Can you please explain to me why?
Jan 30, 2018 01:58 AM
Jan 04, 2016 06:56 AM
ဝင်းဒိုး8မှာ အစ်​ကို​ပြောထားတဲ့အတိုင်း လုပ်​ကြည့်​တယ်​ ခဏပဲရတယ်​ ပါဝါပိတ်​ပြီး ပြန်​သုံးတဲ့အခါ မြန်​မာစာ​ရေးလို့မရ​တော့ဘူး မြန်​မာစာ​ရေးလို့ရပြန်​ရင်​လဲ English ချိန်းလို့ မရ​တော့ပြန်​ဘူး ကူညီ​ပေးပါအုံး
Sep 22, 2015 02:03 AM
patrick simoens နေရပ်- perth Australia :
I want Myanmar font . Pls
Sep 13, 2015 03:38 AM
Thian Piang နေရပ်- USA :
Sep 07, 2015 12:41 PM
Ako I phone Myanmar languageaya bu
Sep 02, 2015 09:36 AM
ilovefree နေရပ်- Myanmar :
Aug 31, 2015 07:07 AM
mie mie နေရပ်- thai :
ဦးဦး D.C နေရပ်- သာဝတိံသာနတ်ပြည် :
Aug 29, 2015 09:43 AM
အကိုကိုကျွန်​​နော်​ front. Style ​လေး​ပြောင်းချင်​လို့ဘယ်​လိုလုပ်​ရမလည်း
Aug 16, 2015 10:35 AM
အကိုကျွ်ျ်​​န်​​တော်​ဖုန်းမြန်​မာ​ဖောင့်​ ချိန်းလိုက်​တာ အဂ်​လိပ်​စာ​ပျောက်​သွားလို့ကူညီပါအကို
Aug 12, 2015 08:52 AM
Thanks RFA so much for burmese font
Jul 17, 2015 01:22 AM
Lia နေရပ်- USA :
Jul 09, 2015 09:38 PM
Jul 07, 2015 10:10 PM
Jun 05, 2015 06:11 AM
very useful site and this site is very valuable thanks
May 19, 2015 06:12 AM
May 05, 2015 05:41 AM
Apr 14, 2015 08:27 AM
Mar 13, 2015 11:18 PM
Internetမှာ ဖတ်​လို့ ရပါတယ်​ ဖုန်းထဲမှာဖတ်​လို့မရပါ
[ ကိုယ့်ဖာသာ ဒေါင်းလို့ မရရင် ဖုန်းဆိုင်မှာ ပြောပြီး လုပ်ကြည့်ပါ --- အယ်ဒီတာ ။]
​ကျော်​ နေရပ်- ရန်​ကုန်​ :
Feb 22, 2015 05:32 AM
Nov 29, 2014 09:12 PM
Bruce Aung :
Thank you for your kind contribution to our society.
Nov 24, 2014 12:57 AM
Gandawin Hein နေရပ်- Taunggyi :
Still unable to read RFA Burmese after downloading Zaw Gyi & Bit font
Oct 26, 2014 06:35 AM
Bankok နေရပ်- Bankok :
Ais 3Gဖုန်း မြန်မာဖောင့်ရသည် စာမ မှန်ပါ
lava iris700 ko bel lo Root lote ya that lel?no computer.
Nov 12, 2014 05:25 AM
အမည်မဖော်လိုသူ နေရပ်- Bangkok :
iphone Myanmar font download lote ma ya voo bae lo lote ya ma lal him
Sep 18, 2014 10:00 PM
Sep 18, 2014 08:06 PM
အမည်မဖော်လိုသူ နေရပ်- yangon :
zawgyi-one font ကို .gzip extenstion နင့် ဘယ်မှာ ရနိုင်မလည်းဗျ
Sep 07, 2014 05:41 AM
k9 နေရပ်- usa :
Aug 28, 2014 10:37 AM
nge lay နေရပ်- thai :
I want to Myanmar fount.Please help me.
အောက်ကလင့်ခ်မှာ ယူလို့ ရပါတယ်။
Jul 03, 2014 02:41 PM
ွမနျမာစာလုးံမမှနျဘူး အပိုငျးပိုငျးလိုကျွဖဈနေတယျ နေရပ်- ဘနျကောကျ :
ZTB dtac ဖုနျး
Aug 20, 2015 11:13 PM
How do I download the Keyboard to type Myanmar Font?
jutis နေရပ်- Chiangmai :
I want myanmar font
May 18, 2014 04:58 AM
zawnai နေရပ်- nonthabubi :
i want to myanmar font.please help me anybody.thank you....
May 16, 2014 08:41 AM
mon lay :
ican't write myanmar font can you help me please!
May 10, 2014 03:34 PM
Friends, this download is only for reading. If you want to write, you must installakeyboard.
amy နေရပ်- myanmar :
Apr 16, 2014 04:55 AM
Tin Tin Htay နေရပ်- Yangon :
I can't write Myanmar font Can you help me please!
Apr 06, 2014 08:03 AM
that နေရပ်- nowmowe :
ti is not good
Mar 30, 2014 01:01 PM
Dubai yout nay tout de ka internet shop myanmar font ko download swal tar ya tal but sar top write loz ma ya thu myar thay tin htar tat comment k top read loz ya taladar bar kyount lal
Mar 27, 2014 07:01 AM
နန်ပွန်း နေရပ်- ကျောင်းဌီု :
MY VILLAGE မှာကတ်တရာ ROAD? မရှိပါ။
Mar 26, 2014 11:23 AM
အကို ရေ အခုလို မြန်မာဖောင့် အလွယ်တကူရယူနိုင်တာလေးကို ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ် အကို လေးစားစွာဖြင့်
Mar 22, 2014 09:18 PM
nyanlinaung.nla93@gmail.com နေရပ်- yangon :
အကို​ရေကျန်​​တော့ကိုnokia lumia525 rootလုပ်​နည်းနဲKeyboardကို​မေးက​နေပို့​ပေးလို့ရလားအကို
Feb 05, 2014 04:00 AM
maungmgkhin နေရပ်- burma :
Jan 14, 2014 06:32 PM
Can Burmese fonts be downloaded In Mac (iPad)?
Jan 11, 2014 12:58 PM
could you plz help me how to download the Myanmar font in widow 8. I tried many times but not yet working so far . Hope that your help will make me able to read news in the day to come. thank you
Jan 04, 2014 10:19 AM
အမည်မဖော်လိုသူ နေရပ်- USA :
Can you help me pls i can read but i can't write myanmar font...how should i do????
Dec 23, 2013 12:37 AM
Thet Paing နေရပ်- Taunggyi :
I can write Myanmar font but I can't read
so,can you help me please,thanks.
Dec 02, 2013 04:06 PM
I follow't what you teach but I can read myanmar font rightly ... my computer is window 8 ... I install zawgyi one font but I can't fead ..why?
Nov 30, 2013 01:42 PM
still i can't read after download zawgyi font on firefox but I can type on key board
Nov 17, 2013 09:51 AM
thanks alot par...
Nov 02, 2013 05:39 AM
Oct 27, 2013 01:34 AM
Phyo Wai Aung နေရပ်- Thailand :
I want to get Myanmar font
Oct 21, 2013 09:25 PM
Please " Sar yay sayar ta Oo yae hmat tann" for today post to Facebook as soundcloud, it's very nice to listen and I wish the Burmese people to know about it.
Jul 25, 2013 04:29 AM
Hnin နေရပ်- Brunei :
I want to have myanmar font
Jun 30, 2013 12:42 PM
maung lin lin latt နေရပ်- malaysia :
i need. myanmar. font
Jun 12, 2013 05:47 PM
john နေရပ်- USA :
Mar 29, 2013 06:19 PM
marmarmin နေရပ်- yangon :
i want Zawgyi one yyttf myanmar fort.
Mar 04, 2013 04:37 AM
ကျှော်မင်းသိန်း နေရပ်- ကျောက်ဖြူနယ် ငန်းကျွန်း :
သိပ်မကြာတဲ့အချိန်မှာမြန်မာဆိုတဲ့ အမိနိုင်ငံကိုပြန်ရတော့မယ် ဘာတွေဖြစ်ဆိုတာကိုတော့ မသိပါဘူး ကျနော်ကတော့
ကျော်မင်းသိန်း နေရပ်- ကျောက်ဖြူနယ် ငန်းကျွန်း :
မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ ကျနော်တို့ ၂၀၀၈ဉပဒေကို ဘယ်လို
Jan 23, 2013 09:51 AM
ဝါဒဖြန့်နေကြတာလား ။ ဒီလိုဆိုရင်ရှေ့ဆက်
သတင်းဌာနတွေအနေနဲ့ ရခိုင်မှာရှိ တဲ့ဘင်္ဂလီ
မိုးမိတ် နေရပ်- ရှမ်းမြောက် :
ကျော်မင်းသိန်း နေရပ်- ကျောက်ဖြူနယ်ငန်းကျွန်း :
ရမှာဖြစ်ကြောင်း ၊၂ ၊ပြည်သူတွေလက်ခံတဲ့အထိပွင့်
လင်းမြင်သာအောင်ရှိဖို့လိုကြောင်း၊ ၃၊ ၂၀၁၅ မတိုင်
ခင်ရွေးကောက်ပွဲဉပဒေကိုရေးသင့်ကြောင်း၊ ၄၊ အဂတိ
လိုက်စားမူးပပျောက်အောင်ဆောင်ရွက်ရေး၊ ၅၊ ပညာရေး
မြင် တင်ရေး၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မူးတိုးရေး၊ ၆၊
ပြည်တွင်းစစ်အမြန်ရပ်စဲရေး ၇၊ ဒုက္ခသေများအရေး
တော့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ တက်ကြွတ်သူတွေ
ကိုထောင်ကိုပို့ ရုံးတင်၊ အချုပ်ခန်းပို့လုပ်
ကျော်မင်းသိန်း နေရပ်- ကျောက်ဖြူနယ် ငန်းကျွန်း :
သိအောင်ဆောက်ရွက်ပေးလိုပါတယ်။ ပုဒ်မ ၁၈
ကိုလည်း ကျနော်ကိုယ်တိုင်နားမလည်ပါ။ အာအက်အေ
အပတ်စဉ်များမှာလေး ဘဘဉီးဝင်းတင်၊ ဘဘစာရေးဆ
Dec 23, 2012 04:09 AM
အမည်မဖော်လိုသူ နေရပ်- greeley co 80631 :
mi go to myanmar
I want to download this Burmese font because there is no Burmese in my Conputer, when I want to write Burmese language I can write this , so I need to download this font.
ဖော်လတ် နေရပ်- ကော့ခပုံရွာ မုဒုံမြိုနယ် :
ကော့ခပုံရွာဥက္ကဋ္ဌ ကမြေကွက်တွေ အများကြီးေ၇ာင်းစားထာတာပါကျေးရွာဘောလုံးကွင်းလဲေ၇ာင်းစားဖို့ချိန်နေတယ်။ လူငယ်တွေအားကစားလုပ်ဖို့ကွင်းမရှိတော့ဘူး။ ရှိသမျှမြေရိုင်းတွေလဲေ၇ာင်းစားလိုကုန်ပြီ။ သူကခြေကလဲကျိုးဘာအလုပ်မှမလုပ်ဘဲ ချမ်းသာနေတာအထက်လူကြီးတွေ ကသေချာစုံစမ်းပေရန်ရွာသားတွေအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားတောင်းခံပါတယ်၊၊
Sep 07, 2012 03:01 PM
kokomg နေရပ်- yangon. dhawbonetown :
Aug 08, 2012 02:16 PM
lungm နေရပ်- malaysia :
Jul 31, 2012 04:24 PM
NN နေရပ်- NAY PYI DAW :
Jun 01, 2012 12:16 PM
kanzaw နေရပ်- bangkok :
good reply to comment
Jan 27, 2013 06:51 AM